दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रिकीको साथ अन्तर्वार्ता। र अन्तर्वार्ताको बीचमा एक अप्रत्याशित परिवर्तन भयो - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: के नाइट्स टेंपलर अस्तित्वमा थियो?
अर्को पोस्ट: हामी तेस्रो विश्व युद्ध कसरी जित्न सक्छौं? उत्तर तपाईको तर्फ हुन सक्छ।
पोष्ट गरिएको2जनवरी 2020 द्वारा रोमोमो लुकाना
हामी जोहानेसबर्ग र दुर्बिन बीचको बसमा थियौं।
मैले सुरु गर्नु अघि मैले यो भन्न आवश्यक छ कि यो अन्तर्वार्ता पूर्ण रूपमा अफहन्डमा गरिएको थियो। हामीसँग लिपिको बारे सोच्न समय थिएन र यो एक्लो इच्छाशक्तिले गरिएको थियो। लेक्सिघको आफ्नै सुझावमा। उनी प्रामाणिक केहि चाहन्थे! सबै भन्दा राम्रो तरिका यो गर्न को लागी एक सेल फोन रेकर्ड गर्न को लागी र यो यो हो। लेक्शिघ यो अद्भुत व्यक्ति हो जुन मैले दक्षिण अफ्रिका हुँदै7घण्टाको बस सवारी र फ्ल्याट टायरमा भेटें। हामीले धेरै साहसिक कार्यहरू र परिस्थिति साझा गरेका छौं जहाँ हामीले एक अर्कालाई सहयोग गरेका छौं। र ब्राजिलियन र दक्षिण अफ्रिकी बीचको मित्रताको जन्म भयो। तपाईं यस पोष्टको अन्त्यमा सक्कली भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ।
यस ब्लगमा सामान्य रूपमा मसँग भाषणमा हरियो र color र लेक्सिग रातो रंग हुनेछ। र थप विज्ञापन बिना नै अन्तर्वार्तामा जान दिनुहोस्!
रोमुलस: म यहाँ लेक्सीगसँग छु
- हामीले जॉबर्ग (जोहानेसबर्ग) बाट दुबैन जाने बसमा भेट्यौं र हामी दक्षिण अफ्रिकाको बारेमा एउटा अन्तर्वार्ता लिन जाँदैछौं। हामीसँग यहाँ केही विवरणहरू छन्। पहिलो प्रश्न:
- म तयार छु, आउनुहोस्
- लेक्सीघ, तपाईलाई आफ्नो देशको बारेमा के सोच्नुहुन्छ? यो बस्नको लागि राम्रो स्थान हो, केही सुधारको लागि, सरकार कस्तो छ? त्यस्तै चीजहरू।
“मलाई लाग्छ कि यो राम्रो ठाउँ हो, तर मलाई लाग्छ कि जीवनको सबै चीजहरू जस्तै त्यहाँ सधैं सुधारको लागि ठाउँ हुन्छ। यसैले जब राजनीति, संस्कृति, धर्म, नस्लवादको कुरा आउँछ, त्यहाँ जहिले पनि सुधारको ठाउँ हुन्छ। तर जहाँ म जन्म भएको थिएँ मलाई मन पर्छ र यसको कदर गर्छु।
- धेरै राम्रो। र मानिसहरू यहाँ दक्षिण अफ्रिका आउँछन् ...
- तपाईं कसरी?
- हो, म जस्तै, पहिले पर्यटन को लागी, अन्वेषण गर्न, जनावरहरु (सफारीमा) र मनपराउँन। तर म दक्षिण अफ्रिका भन्दा पर जान्छु। त्यसैले म रंगभेद र सम्बन्धित शीर्षकहरूको बारेमा तपाईंको राय जान्न चाहन्छु। माफ गर्नुहोस् ...
होइन, होइन, यो ठीक छ। खैर, हाम्रो विचार छ कि अन्य देशहरू वा महादेशका मानिसहरु जब तिनीहरु दक्षिण अफ्रिकाको बारेमा सोच्दछन्, जनावरहरूको बारेमा सोच्दछन्। उनीहरू सोच्दैनन् कि दक्षिण अफ्रिका पर्याप्त परिष्कृत छ, वा केहि राज्यहरूमा उदार। तर म तिनीहरूलाई दोष दिदैन किनकि उनीहरूसँग त्यस्तो प्रकारको जानकारी छैन। कति दक्षिण अफ्रिका बढेको छ।
यसैले रंगभेद मुद्दामा फर्कनुहोस्, यहाँ उही समस्या छ (गलत जानकारी)। मलाई लाग्छ हामी नेलसन मण्डेला जेलबाट रिहा भएदेखि यता हामी दक्षिण अफ्रिकीहरूसँग धेरै लामो यात्रामा पुगेका छौं। र दक्षिण अफ्रिकी सरकारको बिरूद्ध जवाफ दिँदै। र त्यो केहि पहिले थियो। त्यसैले यो घाउ निको भइरहेको छ।
म झुठो बोल्न चाहन्नँ, हामी त्यहाँ पुग्यौं, तर हामी बाटोमा छौं।
- धेरै राम्रो। त्यसोभए मलाई लाग्छ कि यो राम्रो हुँदैछ, हैन ?!
- हो, हामी बाटोमा छौं।
"ठिक छ, दक्षिण अफ्रिकामा तपाईको मनपर्ने स्थान के हुन्छ?"
- समुद्र तट! तपाईंले सोध्न पनि सक्नुहुन्न! समुद्र तट मेरो मनपर्ने स्थान हो!
"तर केप टाउनमा वा समुद्री तट, वा दुर्बईन, कुन समुद्री तट?"
- Durbain मा समुद्र तट! यो कुनै अन्य समुद्र तट जस्तो छैन। र यसको राम्रो मौसम छ। के हामी अब (डिसेम्बर) बाट जाँदै छौं। तिमीलाई थाहा छ, यो केवल समुद्री किनारको लागि मात्र होइन। तर हामी विश्वास गर्छौं (कालो व्यक्ति) समुद्रमा पौंडी पोखरी भन्दा फरक जब छालहरू आउँछ र तपाईंको शरीर भित्र जान्छ। तिनीहरूले तपाइँलाई जुनसुकै समस्याहरू हटाउँदछन्: भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक, छालहरूले छोडिदिन्छन्। यो स्वतन्त्र गर्न को लागी एक तरीका हो। र त्यो म विश्वास गर्छु।
- त्यहाँ ब्राजिलमा, हामीसँग केहि समान छ ... ठ्याक्कै त्यस्तै हो, गहिराइको मतलब हुँदैन। तर जसले वर्षको अन्त्यमा येमान्जामा विश्वास गर्छन् उनीहरू सात छालहरू हाम फाल्छन् र फूलहरू जहाजमा हाल्छन्। तिनीहरू भन्छन कि यो एक राम्रो नयाँ वर्षको ग्यारेन्टी गर्ने तरिका हो।
- हो, त्यो यो हो कि तपाइँले कसरी यसो गर्नुभयो, यो यत्ति गहिरा छैन ...
- तपाईं कालो र सेतो को बीचको छुट्टि को बारे मा के सोच्नुहुन्छ?
- म यसलाई घृणा गर्छु!
- म पनि यसलाई घृणा गर्छु!
"र तपाईं यसको प्रमाण हुनुहुन्थ्यो!" खैर, हाम्रो सम्पूर्ण बस यात्रा अक्षरशः एक जातिय भेदभावको साथ थियो। व्यक्तिगत रूपमा म यो सिफारिस गर्दैन। मलाई लाग्दैन कि कोहीले केवल प्रबल हुनु पर्छ किन कि तिनीहरू सेता, भारतीय, कालो, विविध, वा जे भए पनि। किनभने यदि तपाईंले मानिसहरूलाई काट्नु भयो भने तिनीहरू पनि रगत बग्नेछन्। मलाई लाग्छ हामीले जस्तो व्यवहार गर्नु पर्छ उनीहरूलाई पनि हामीले व्यवहार गर्नुपर्छ। छालाको रंग जस्तोसुकै। मँ तिम्रो लागि राम्रो हुन सक्छु, तपाईं मसंग राम्रो हुनुहुन्न भने पनि। दक्षिण अफ्रिकामा सबैजना होईन, तर केहि मानिसहरुमा मानसिकता छ। तिनीहरू सोच्दछन् कि उनीहरूलाई कुनै तरिकाले क्षतिपूर्ति दिइनेछ। यी व्यक्तिहरू अझै पनि उनीहरूको दिमागमा अलग छन्। अरूले सोच्छन्, "म तपाईं भन्दा राम्रो छु, किनकि म सेतो छु।" र तिनीहरू गलत छन्।
म चाहन्छु कि हामी एक अर्कालाई मान्छेको रूपमा हेर्न सक्छौ। ती मानिसहरू सँगै बसे। तपाईं र म जस्तो!
"र जवाफको पूरक हुनको लागि, मलाई लाग्छ कि र of्गको परवाह नगरी मानिसहरूलाई व्यवहार गर्नु नै हामीलाई मानवको रूपमा विकसित गर्न र अझ राम्रो विश्व बनाउने बनाउछ।"
- साथीहरु, यदि तपाईं यसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ ... म आज यस मान्छे संग भेटे!
र यहाँ शाब्दिक हामी यहाँ के कुरा गरिरहेको को एक उदाहरण हो!
मैले आज उनलाई भेटें, तर ऊ मलाई राम्रो व्यक्ति, हर्मोनिक भएको देखिन्थ्यो र त्यसबेलादेखि हामी यसका साथ व्यवहार गर्दैछौं, साथमा। मैले उसको उर्जा र सोचाइ महसुस गरें ... ऊ हो जससँग म बस्न सक्छु।
"र त्यहि रूपमा मैले उनलाई राम्रो उर्जा महसुस गरें र ... त्यसबेलादेखि हामी कालो र सेतो बीचको यी अवरोधहरू पार गर्न सँगै चीजहरू गरिरहेका छौं।" हामी त्यो भन्दा बढी छौं।
उदाहरण: हामीले यहाँ जानको लागि उबर प्राप्त गर्न प्रयास गर्यौं, तर अनुप्रयोगले काम गरेन। त्यसकारण उनीहरूले दुई गुणा बढी मूल्य तिर्ने कोशिश गरे, केवल किनभने उनी एक सेता मानिससँग थिए।
- हो उनीहरूले सोचे, "उनी सेता छन् त्यसैले उनीसंग पैसा छ"।
"त्यस बेला उनले मलाई अवस्थाबारे बताइदिए, र म यो विश्वास गर्न चाहन्नथें।" तर त्यस पछि अनुप्रयोग काममा फर्कियो र मूल्य आयो, र यो हामीबाट चार्ज गर्न चाहेको आधा भन्दा कम थियो। त्यसैले मलाई लाग्छ कि दक्षिण अफ्रिका (र ब्राजिल पनि) यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। यो त मैले महसुस गरे कि मण्डेलाले शुरू गरेको कुरा राम्रो थियो, तर अझै सबैमा राम्रो छैन।
- होइन, यो होईन।
"र ब्राजिलियनहरू, यदि तपाईं दक्षिण अफ्रिका आउनुभयो भने यहाँबाट डाटा कार्ड खरीद गर्नुहोस्।" किनकि तपाईंसँग अझै कतै वाइफाइ छैन।
"र हामीले शाब्दिक रूप मा डुरबाइन बस स्टेशन माथि र तल जानुपर्‍यो। केवल त्यसका लागि। तर हेर, हामी अहिले खाजा खाइरहेका छौं! आज कसैलाई भेटेर म खाजा गर्दैछु!
"र हामी यहाँ छौं किनकि हामी साथीहरू हौं, किनकि हामी यी भिन्नताहरू देख्दैनौं, कि कसैलाई रंगका कारण फरक व्यवहार गर्नुपर्दछ।"
- ओह, तपाईं मुस्कुराउँदा धेरै राम्रो देखिनुहुन्छ! आह अब यो फ्ल्यास भइरहेको छ।
- हेर्नुहोस्, यो किन कि यो सेतो हुन नराम्रो छ, किनभने तपाइँ रातो हुनुभयो! हामी रंगका व्यक्ति हौं।
- र तपाईं हुनुहुन्छ! यदि कसैले तपाइँलाई कुट्छ भने, तपाइँ खैरो, बैजनी ...
- र यदि हामी बिरामी पर्छौं भने हामी हरियो हुन्छौं।
- हामीसँग तपाईलाई लाज लाग्न सक्छ, तपाई बिरामी हुन सक्नुहुन्छ, कुटाउन सक्नुहुन्छ… केही परिवर्तन हुँदैन, हामी समान रंग पाउँछौं। र हामी यो मनपराउँदछौं र यसको कदर गर्दछौं किनभने यो हामी भएको मार्ग हो।
यो अन्तर्वार्ता परिवर्तन गरौं!
- कुरो, मलाई मेरो कपाल ठीक छ।
- ओह र यात्रा को समयमा तिनीहरूले मलाई बसमा एक उपनाम दिए। तिनीहरूले मलाई जोन भनेर बोलाए, किनकि उनीहरूका लागि "रोमुलस" एकदम ठूलो थियो।
"हो, उहाँ श्री एच वा जोन थिए। रोमुलस एकदम ठूलो थिए।"
ठीक छ, तर मलाई अब तपाईं सोध्न दिनुहोस्। र इमानदार हुनुहोस्। तपाईलाई दक्षिण अफ्रिकाको बारेमा के थाहा छ? म भन्छु, तपाईं यहाँ कुनै चीजको लागि आउनुभएको छैन। तपाईले केहि हेर्न चाहनुभएको हुनुपर्दछ।
"ठीक छ, मलाई दक्षिण अफ्रिकाको बारेमा के थाहा थियो लेबलले भनेको भनेको हो।" जुन जीव र वनस्पतिको ठूलो विविधताको देश हो। एक ठाउँ जहाँ तपाईंसँग जंगल छ, जहाँ तपाईं सफारीमा जान सक्नुहुन्छ, तर हतियारबाट क्यामेरामा स्विच गर्नुहोस्। मेरो मतलब, यो शिकार सफारी होइन, तर फोटो सफारी हो। र त्यो रंगभेद समाप्त भयो। म यहाँ नआउन्जेल त्यो मैले सोचें। र नेल्सन मण्डेला एक महान नेता थिए र उनले दक्षिण अफ्रिकालाई अर्को तहमा पुर्‍याएका थिए।
तर जब म यहाँ आइपुगेँ, म अब त्यस्तो विचार गर्दिनँ ... मलाई लाग्छ ब्राजिलसँग यसको अझ धेरै गर्न बाँकी छ। त्यहाँ हामी विकास गर्न, अनुकूलन गर्न पनि खोजिरहेका छौं ... र दक्षिण अफ्रिकाको बारेमा मलाई के मनपर्‍यो त्यो स्वागत थियो। दक्षिण अफ्रिकीले तपाईलाई स्वागत गर्दछन् यदि तपाई म जस्तो सेता मान्छे भए पनि। तिनीहरू पनि चीजहरू गर्ने तरिकामा राम्रो उर्जा राख्छन्। र सबै देशहरूमा यो छैन। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं युरोपका केहि देशहरूमा जानुहुन्छ भने तिनीहरू थोरै चिसो हुन्छन्। ब्राजिलमा, तिनीहरू सँगै बस्छन्, सबैको साथ मजाक गर्छन्। र हुनसक्छ यो थोरै यो जस्तो हो।
- हामीलाई ठट्टा ठीक छ ?!
केवल एउटा प्रश्न र हामीले सक्यौं।
"तपाई जताततै मान्छेको अन्तर्वार्ता लिन जान सक्नुहुन्न र कसैले तपाईलाई अन्तर्वार्ता लिने छैन। म तपाईंलाई अहिले अन्तर्वार्ता दिनेछु!
- तर म यसको लागि तयार थिएन। तैपनि, आऊ, यो गरौं।
- हो मलाई थाहा छ, तपाईं कहिले पनि हुनुहुन्न। तर त्यो मेरो अस्तित्वको प्रमुख तरीका हो।
ठिक छ, यदि तपाइँ विश्वव्यापी रूपमा एक चीज परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ वा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्दैन, तपाईं के परिवर्तन गर्नुहुन्छ?
- मलाई लाग्छ कि म मान्छेको विश्वास परिवर्तन गर्दछ ...
म विश्वास गर्दछु कि सबैमा कुनै न कुनै कुरामा विश्वास गर्नुपर्दछ। चाहे परमेश्वरमा वा व्यक्तिमा ... किनकि विश्वास हुनु आवश्यक छ।
यदि एउटा व्यक्तिमा केहि पनि विश्वास छैन भने, यो उसलाई नष्ट गर्न सक्दछ। उनी निराश हुन सक्छन्, वा आफैलाई मार्न सक्छन् ... विश्वासको कमीको लागि। यसैले यदि म संसारमा कुनै कुरा परिवर्तन गर्न सक्थें भने, म विश्वास गर्छु।
- किन? हो, मलाई थाहा छ तपाईंले यसलाई व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, तर मलाई लाग्छ कि हामी अझै जोनको हृदयसम्म पुगेका छैनौं। तपाईले किन सबै मानिसहरुमा विश्वास राख्नु हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो? ठीक छ र त्यसपछि म त्यो अन्तिम प्रश्नको उत्तर पनि दिनेछु र हामीले सक्यौं।
किनभने जब तपाईं कुनै चीजमा विश्वास गर्नुहुन्छ वा कसैलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईं जीवित हुनुको कारण छ।
- ओह, त्यो धेरै गहिरो थियो!
- तर यो सत्य हो! मलाई मतलब छैन यदि तपाईं भगवान, अल्लाह, बुद्धमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने ... त्यस्तो छैन। म अर्को प्रकारको विश्वासको कुरा गर्छु। यदि तपाईंसँग सपनाहरू पूरा गर्ने, परिवार एकजुट हुनु, वा बढ्दो बच्चाको सम्भाव्यता छ भने, तपाईंसँग जीवितै बस्न पर्याप्त कारण छ।
- ठीक छ, अब म उही प्रश्नको उत्तर दिनेछु। म संसारमा के परिवर्तन गर्दछु?
... यो अरूलाई हामीले हेर्ने तरिका हुनेछ।
- र मैले सोध्नु पर्छ, किन?
- किनभने जतिसक्दो चाँडो तपाईंले महसुस गर्नुभयो कि अन्य व्यक्ति तपाईं जत्तिकै कमजोर छ, त्यस व्यक्तिलाई जति धेरै प्रेम चाहिन्छ, आदर चाहिन्छ, त्यस्तै तपाईंले व्यक्तिको रंग देख्न छाड्नुहुन्छ र सुन्दरता महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ। मानवीय तरिकामा, विश्वव्यापी रूपमा। र कुनै चीजमा व्यक्तिको विश्वास परिवर्तन गर्ने बारेमा, म प्रेममा विश्वास राख्छु। प्रेमले सबै कुरा निको पार्छ। म भावनात्मक पक्षको बारेमा कुरा गर्ने धेरै गाह्रो ठाउँहरूमा पुगेको छु, जुन मलाई पार गर्न विश्वासको आवश्यक पर्दछ। र यदि म उच्च शक्तिमा विश्वास गर्दिन भने म त्यहाँबाट उठ्ने छैन। यसले मलाई बाहिर तान्यो। र आज म भन्न सक्छु: म जीवित छु।
- हो, उही म भन्न सक्दछु ... म धेरै गहिरा स्थानहरूमा छु, मेरो लागि धेरै कठिन समस्याहरूमा। हुनसक्छ अन्य मानिसहरूलाई यो मूर्खतापूर्ण छ, तर मेरो लागि तिनीहरू दुर्गन्धित चीजहरू थिए। र विश्वास यही हो जुन मलाई बढ्न बनाउँछ र मलाई त्यहाँबाट बाहिर निकालिन्छ। यो कसैले कसैलाई भनेको जस्तै थियोः हे, तपाईंसँग अझै अगाडि बढ्न, बाँच्नको लागि, प्वालबाट बाहिरिनु पर्ने कारण छ।
- र त्यो हो! र यो (उही समय) हो
त्यसोभए साथीहरू, यदि तपाईं यो हेरिरहनु भएको छ भने, कृपया जान्नुहोस् प्रेम भन्दा ठूलो अरू केही छैन, आदर भन्दा बढी, र "जोन" जान्नु भन्दा राम्रो केहि छैन! 😆
- आह, म तिमीलाई एउटा अंगालो दिनेछु! किनभने यो ब्राजिलियनहरूले के गर्छन्! haha
ठिक छ, यदि तपाईंले यो अन्तर्वार्ताको आनन्द लिनुभयो। कृपया हामीलाई यहाँ पछ्याउनुहोस्। रातो बटनमा तपाईको इ-मेल द्वारा मात्र। सबैलाई आलिंगन र अर्को पोस्ट सम्म। 😎👉
साक्षात्कार Apartheid दक्षिण अफ्रीका Durbain साक्षात्कार जोहान्सबर्ग यूहन्ना नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रिकी